Shabakadaha SME: markii ugu horreysay ee la gooyay meeris | Laga soo bilaabo Linux
Waxaan rabnaa inaan sameynocut horeysay dalwaddii»Kahor intaadan quusin hirgelinta iyo qaabeynta adeegyada shabakadaha ugu caansan ee loo isticmaalo SMEs. Waxaan dhahnaa "cut cut", maxaa yeelay waxaan hubaa inaan markale wax ku qori doono mowduucyada horey loo soo koobay laakiin qeybinta kale: desktop la leh CentOS ama OpenSuSE iyo kuwa kale. Iyagu waa alaab aan weli haysto, maxaa yeelay ma haysto bakhaarro, in ka badan ama ka yar oo dhammaystiran, oo ah qaybinta aan hayo.
Maqaalladayada waxaan kaliya ku siinnaa a Bar mowduuc kasta oo laga hadlay. Ma noqon karto wado kale. Waa run inaan isku dayeyno inaan wax yar ku milicsanno mid kasta oo ka mid ah, si aan ugu adeegno hage loogu talagalay akhristayaasha ku hadla Isbaanishka markay fulinayaan adeeg, ha ahaato tijaabin ama soo saar.
LNidaamyada lagu sharraxay dhammaan qodobbada la daabacay ayaa shaqeynaya xitaa jawiga wax soo saarka. Wax kama qorno wax aanan tijaabin oo aan dhowr jeer hubin.
Waxaan isku dayeynaa inaan raacno amar macquul ah oo ku saabsan keenista. Mawduucyadii ugu horreeyay waxay u heellanaayeen inay naga dhigaan Xarun Shaqeed. Kadib, iyadoo lala socdo Debian iyo CentOS, si loo sameeyo a Kormeeraha ku saabsan Qemu-KVM. Mar dambe si loo maareeyo kormeerayaasha 'hypervisors', ama iyada oo loo marayo Maareeyaha Virt-ka, amarrada amar-bixin, ama iyada oo loo marayo interface-ka ugu weyn si loo maareeyo hypervisors oo ah amarka barato, oo si dhow ugu xiran dukaanka buugaagta libvirt.
1 Maxaan ugu adkeysaneynaa Qemu-KVM, Maamulaha Virt-ka iyo Virsh?
2 Maxaynaan wax uga qorin Ubuntu?
3 Maqaallo noocee ah ayaan daabacnay illaa hadda?
4 Mowduucyadee ayaan ka wada hadli doonnaa mustaqbalka?
Maxaan ugu adkeysaneynaa Qemu-KVM, Maamulaha Virt-ka iyo Virsh?
Barnaamijyada kor ku xusan ayaa lagu rakibay loona qaabeeyey si isku mid ah qaybinta loo xushay aasaaska taxanaha SMB.
Waxaa laga helaa keyd ahaan keydka qaybinta iyo xitaa DVD-yada rakibidda.
Ugu yaraan waan ogahay in Ubuntu, CentOS, iyo OpenSuSE, ay ku bixiyaan mid kasta oo ka mid ah Rakibayaasha xulasho u heellan inay ku rakibaan a Kormeeraha.
Kuma xirna haba yaraatee jawiga desktop-ka ee la isticmaalo.
Xalka ku saleysan barnaamijyadii hore wuxuu si aad ah ugu shaqeeyaa xaaladaha soosocda, oo kaladuwan xulashada Isdhexgalka Maamulka, taas oo kuxiran tirada takhaatiirta heerkulka sare iyo makiinadahooda farsamada, ama sida kuxiran dookhaaga shaqsiyadeed iyo dhadhanka:
Miis - desktop
Goobta Shaqada - Goobta Shaqada
Qaar badan oo kormeerayaal ah sida kiiska SME
Daruur, Cloud, Xarunta Macluumaadka, Adeeg martigelin, ama wax kasta oo aad rabto inaad ugu yeerto tiro badan oo ah server-yada muuqaalka iyo muuqaalka ah
Ma diidi karno in xalka ku saleysan Qemu-KVM uu yahay mid si aad ah loo qiyaasi karo, taasna waxay ku timaadaa si caadi ah meelaha ugu badan ee keydka ee nidaamyada hawlgalka Linux ee inta badan loo isticmaalo jawiga ganacsiga.
en el Xarunta Macluumaadka halkaasoo uu ka shaqeeyo saaxiibkey iyo saaxiibkey Julio Cesar Carballo, waxay leeyihiin in ka badan 4000 oo server oo leh Qemu-KVM, isku xirka maamulka OpenStack, iyo Ubuntu Server operating system. Saaxiib kale oo ay wada shaqeeyaan, Eduardo Noel Nuñez, wuxuu leeyahay 4 kormeerayaal sare oo leh Qemu-KVM, oVirt interface interface, iyo CentOS 7. Kaliya ha aaminin tixraacyada aan soo bandhigno oo ah tusaalooyin caan ah. Ka raadi internetka inta shirkadood ee waaweyn iyo kuwa yaryarba ay qaateen xalkaan.
Inbadan oo Akhristayaal ah iyo Kuwa Raaca Qoraaladayda waxay ogyihiin doorbidayda Debian. Si kastaba ha noqotee, marwalba waan aqoonsanaa Hoggaanka shirkadda Red Hat, Inc. ee ganacsiga adduunka iyadoo la adeegsanayo Linux, oo aan lagu xusin SuSE Enterprise iyo noocyo kala duwan.
Fikradayda: Khamaarka Red Hat, Inc. ee ka dhanka ah xalalka VMware, waa si sax ah Qemu-KVM, libvirt, Virt-Manager iyo oVirt. Marka loo eego aqoontayda hoose iyo fahamkayga, Red Hat, Inc, waxay muddo dheer qaadanaysay qaybta ugu fiican ee digaagga. 😉
Maxaynaan wax uga qorin Ubuntu?
Waxaan tixgelinaynaa in mowduucyada laga hadlay ee ku saabsan hirgelinta adeegyada shabakadda ee Debian, ay u yihiin hage bilow ah Ubuntu. Canonical wuxuu si xoogan ugu dhaqaaqayaa qaybinta Ubuntu Server dhanka deegaanka ganacsiga. Xitaa waan aqriyay fikradaha ah inuu ka tanaasulay Ubuntu Desktop xoogaa ah, qaab aanan ku raacsaneyn. Ubuntu waa qaybinta ka samaysay farqiga u dhexeeya isticmaalka Linux ee Desktops. Linux Mint, oo ah farac toos ah oo Ubuntu ah, wuxuu bixiyaa -waxaa ka mid ah hagaajinta kale - xal dhammaystiran oo dhammaystiran marka la eego tirada xirmooyinka bilowga ah ee loo baahan yahay, si nolosha loogu fududeeyo isticmaalaha hadda yimid Linux.
Haddii aan booqano degmooyin badan oo loogu talagalay daabacaadda maqaallo ku saabsan adeegyada, waxaan ka heli doonnaa tiro badan oo ku saabsan qaybintaan. Dhinaca kale, waxaa jira boggaga rasmiga ah ee Ubuntu ee loogu talagalay mowduuca adeegyada shabakadaha kaas oo lagu soo bandhigo maqaallo aad u wanaagsan.
Maqaalka Qeybinta waqtiga qaybinta Linux waxaan cadeynay sababta aan u dooranay Debian, CentOS - RHEL, iyo OpenSuSe - SSE, Sida qaybinta aasaasiga ah ee maqaalladayada.
Maqaallo noocee ah ayaan daabacnay illaa hadda?
Mowduucyadee ayaan ka wada hadli doonnaa mustaqbalka?
Hirgelinta adeegyada ugu caansan ee SMEs: DNS, DHCP, NTP, iwm.
Xarumaha CentOS iyo OpenSuSE
DNS iyo DHCP oo leh OpenSuSE adoo adeegsanaya Yast
… Iyo waxyaabo kaloo badan
Iyo ilaa xiisaha soo socda, saaxiibo!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Shabakadaha SME: markii ugu horreysay oo la jaro
Saaxiibka taxanaha weyn ee Federico. Sidaan horeyba u sheegay, waxaan sii wadaa inaan ku dabaqo wax soo saar leh natiijooyin aad u wanaagsan. Intaa waxaa sii dheer, waxaan horeyba u sameeyay shaybaarka gurigeyga si aan ugu sii wado mowduucyada aanan ka codsan doonin shirkadeyda. Qaddarinteyda !.
Waan ku faraxsanahay inaan maqlo inaad taladayda qaadatay, Zodiac. Sug maqaallada soo socda.
Maxay tahay shaqo weyn oo aad ka qabatay barta, gacaliyahayga Federico, waxaan ka mid ahay kuwa sameeyay sheybaar shaqsiyeed ka dib talooyinkaaga talaabo talaabo ah. Shaki la'aan waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan ee waayadan dambe inaan si faahfaahsan u akhriyo maqaalladaada saxda ah iyo khibradaha leh.
Aad baad ugu mahadsan tahay faahfaahin kasta iyo daqiiqad kasta oo aad bixiso si aad u barato qof aniga oo kale ah, waxaan haysanaa wax badan, inbadan oo aan baranno.
Marka, gacaliye Lagarto, maadaama ay jiraan dad badan oo soo booqda silsiladan - in kasta oo aysan faallo ka bixin - waan sii wadi doonaa qorista. Sug kuwa soo socda ee ku saabsan OpenSUSE!